by Win MM Htay on 09 March, 2021
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေထောက်လေးတွေလို သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်စေမယ့် ချေးချွတ်နည်း (၆) မျိုး
ရှေးတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိန်းမလှလေးတွေဆိုတာ ခေါင်းအစ၊ ခြေအဆုံး လှရိုးထုံးစံ ရှိတယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်လည်း မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာ ပြစ်မျိုးမှည့်မထင်တဲ့ သဘာဝအလှအပကို ပိုင်ဆိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
အသက်ရှည်ရှည် နေလိုသူတိုင်းအတွက် အသက်ရှည်ပြီး အနာကင်းစေတဲ့ အစားအစာ (၈)မျိုး
ကျန်းမာရေးခြင်းဟာ လူသားတိုင်းအတွက် လာဘ်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား သွားလာဖို့အတွက် ခန္တာကိုယ်က ပေးတဲ့ စွမ်းအင်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ စွမ်းအင်တွေ ရရှိဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးရပါတယ်။ Read full article
ရာသီမရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် မျက်မြှေးရောင်ရောဂါကို ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
မျက်မြှေးရောင်ရောဂါ (သို့မဟုတ်) မျက်စိနာရောဂါ (Conjunctivitis) ဆိုသည်မှာ များသောအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးများနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး လူတိုင်းလိုလို အဖြစ်များသော မျက်စိရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ Read full article
အသုံးမလိုတဲ့ ကြက်ဥခွံတွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀) ခု
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥတွေကို ကြော်လိုက်၊ ချက်လိုက်၊ ပြုတ်လိုက်၊ သုတ်လိုက် မျိုးစုံ လုပ်စားကြပေမယ့် ကြက်ဥခွံတွေကိုတော့ သိပ်ဂရုစိုက်လေ့ မရှိဘဲ အလွယ်တကူ လွှင့်ပစ်လိုက်မိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြက်ဥခွံတွေမှာ လူတွေ မသိသေးတဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ် Read full article
Vitamin E က အရေပြားအတွင်းမှာရှိတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို လျှော့ချပေးတဲ့ antioxidant တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
E-Cigarette,Vapeနဲ့Shisha စတဲ့ ဆေးလိပ်အစားထိုး ပစ္စည်းတွေက တစ်ကယ် အန္တရယ်ကင်းရဲ့လား?
(၂၁)ရာစုရဲ့ လူငယ်တော်တော်များများဟာ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးတွေအစား ဆေးလိပ်အစားထိုး ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ E-Cigarette, Vape နဲ့ Shisha စတာတွေနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာကြပါတယ်။ ဒီမှာ မေးစရာ ပေါ်လာတာက ဒီအရာတွေဟာ အန္တရာယ် မရှိတာ သေချာရဲ့လား? Read full article
by Win MM Htay on 18 February, 2021
နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်း (၈)နည်း
(၁၂)ရာသီ ပူနေတတ်တဲ့ နေရောင်ကြောင့် အသားအရေတွေ ညိုမဲပြီး မညီမညာ ဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေကြသူတွေ ရှိကြမှာပါ။ နေ့စဉ်လှုပ်ရှာ သွားလာနေရတဲ့အချိန်မှာ နေရောင်ခြည်ကို ရှောင်ဖို့ဆိုတာကလည်း သိပ်တော့ မလွယ်လှပါဘူးနော်။ Read full article
ရန်ကုန်အခြေပြု ပရဟိတအဖွဲ့ Clean Yangon နှင့် Huawei Myanmar တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဒလမြို့နယ်ရှိ အိမ်ခြေ (၅၀၀) အတွက် တန်ဖိုးငွေကျပ်(၇၅) သိန်းရှိသည့် အခြေခံစားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း Huawei ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ Read full article
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမှာ အထိနာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကူးစက်မှုနှုန်းကိုလျော့ချနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရွှေမန်းမြို့ရဲ့ ကူးစက်မှုက ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ Read full article